सुशान्तकी प्रेमिका रियाविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी ! « MNTVONLINE.COM
सुशान्तकी प्रेमिका रियाविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी !
बलिउड अभिनेता सुशान्तसिंह राजपूतकी प्रेमिका रिया चक्रवर्तीविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी परेको छ । सुशान्तका बुबा केके सिंहले उनीविरुद्ध पटनाको राजीवनगर थानामा उजुरी (एफआइआर) दर्ता गराएका हुन् ।
एफआइआर रिया चक्रवर्ती, उनकी आमा, पिता, भाइ र दुई म्यानेजरविरुद्ध दर्ता गरिएको छ । सुशान्तका पिताले रियालाई आत्महत्या गर्न उक्साएको आरोप लगाएकी छिन् । के।के सिंहले सन् २०१९ सम्म छोरालाई कुनै दिमागी समस्या नभएको र रियाको सम्पर्कमा आएपछि अचानक के भयो भनेर प्रश्न सोधेका छन् । उनका अनुसार जो डाक्टरले सुशान्तको उपचार गरेका थिए, यस्तो लाग्छ, उनी पनि रियाको षड्यन्त्रमा समावेश थिए । यो कुराको पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने के।के सिंहले माग राखेका छन् ।
सुशान्त गत १४ जुनका दिन मुम्बईको बान्द्रास्थित आफ्नै घरमा झुण्डिएको अवस्थामा मृत भेटिएका थिए । प्रहरीले यसलाई आत्महत्या भनेको छ । तर उनका फ्यानहरुले यसलाई हत्या भन्दै सिबीआईको संलग्नतामा छानबिन गरिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।